Home Wararka Gudaha Kulankii maanta deni iyo Baarlamaanka Maxaa looga hadlay kulanka...
Kulankii maanta deni iyo Baarlamaanka Maxaa looga hadlay kulanka ?
XOG KULANKII MAANTA MADAXWEYNE DENI IYO BAARLAMANKA PUNTLAND?
Xarunta Hido Raac oo ku taal durdurka Dareyle ee magaalada Garoowe waxaa maanta ka qabsoomay kulan albaabadu ay u xiran-yihiin oo dhexmaray Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo Qaar ka mid ah Golaha wakiilada Dowlada Puntland.
Kullankii maanta waxaa soo xaadiray 33 Mudane oo katirsan Baarlamanka waxaana ka baaqday ka qeybgalkiisa kala bar gollaha Xildhibaanada Puntland.
Warar madax banaan oo kasoo baxay kulankaas ayaa sheegaya Madaxweyne Deni inuu kala hadlay Xildhibaanada dhawr arimood oo ku saabsan qorshihiisa mustaqbalka siyaasadeed,khilaafka ka dhexeeya isaga iyo Madaxweyne kuxigeenka Axmed Karaash iyo Dhaqdhaqaaq maalmihii lasoo dhaafey a hadal hayo oo ku saabsan inay wadaan Baarlamanka Puntland.
Inta badan Madaxweynaha Puntland wuxuu diirada ku saaray hadalkiisa inay ka go’an tahay mudada uga hartay xukunkiisa dib usoo nooleynta barnaamijkii Dimuqraadiyeynta Puntland,wuxuuna sharaxay qorshihiisa siyaasadeed habayaraatee inaysan ku jirin Mudo kororsi balse taas bedelkeeda uu ku kalsoon yahay hadii Alle u calfo inuu Xukunka Puntland kusoo laaban doono isaga oo ku yimid doorasho Shacab oo qof iyo cod ah.
Wuxuu ka codsadey Xildhibaanada inaysan ku dhaqaaqin talaabo codka kalsoonida ay ugala noqdaan gollihiisa Xukuumada balse hadalkaas kuma celcelin si la mid ah mowduucyadii kale oo faahfaahintooda uu ugu dheeraadey Xildhibaanadii soo xaadiray kulanka.
Madaxweyne Siciid Deni ayaa ka sheegay sida xoggaha hoose sheegayaan inaan isaga iyo cid kale oo ka socota Puntland midna lagala tashan magacaabistii Raysalwasaaraha cusub ee dowladda Federaalka Soomaaliya Islamarkaana Aanu qiyaasi karin sida uu noqonayo xiriirka iyo wada shaqeynta dhex mari Doonta Puntland iyo Villa Somalia.
Wuxuuna sheegay inuu garowsan yahay dad badan oo kula coloobay doonistiisii Madaxweyne-nimo iyo Doonistiisii Raysalwasaarenimo Islamarkaana haatan ay jiraan Xildhibaano u xanaaqsan oo katirsan gollaha baarlamanka Puntland oo ku sugan Garoowe balse maanta diiday inay soo Ajiibaan kaqeybgalka kulankii qado sharfeedka oo uu ku casumay dhamaan Baarlamanka.
Mudane Siciid Deni wuxuu rajo fiican ka muujiyay in heshiis ay ka wada gaari doonaan khilaafka ka dhaxeeya isaga iyo Axmed Karaash,wuxuuna sheegay xalay kulan arrimahaas labadoodu ay uga wada hadlayaan inuu dhexmarey,sidoo kalena caawa kullanka labaad oo xiga ay u balansan yihiin.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Magacaaban Oo Bilaabay Kulamo Uu Ku Raadinayo Codka Kalsoonida
Next articlekhasaaro oo Saciid Deni kasoo gaaray doorashadii Soomaaliya